Laanta TCN waxaa lagu dhisay shanghai ~~~ - TCN
Laanta TCN waxaa lagu dhisay shanghai ~~~
Waqtiga: 2019-02-19 Hits:
Intii lagu guda jiray Bandhigii Laydhka, Mashiinka iibinta TCN ayaa ku dhacay Xarunta Khibradda Macaamiisha ee Shanghai !!!
Bandhiga Laydhku waa maalinta shan iyo tobnaad ee bisha koowaad ee kalandarka dayaxa sannad walba. Waa xafladii ugu dambeysay ee ugu muhiimsan caadooyinka dabaaldega Shiinaha. Iyada oo ka mid ahayd dabbaaldegyada dhaqameed ee Shiinaha, Bandhiga Laydhku wuxuu had iyo jeer u ahaa dabbaaldegga Shiinaha. Maalintaan, sida caadada u ah, qof waliba waa inuu cunaa qashin-qubka si ay ula midoobaan qoysaskooda sanadka oo dhan.
Sannadkan, TCN waxay dooratay hab kale oo loogu dabaaldego xafladda, oo ka tegay lens-ka dadka qaarkood oo weli ku mashquulsan munaasabadda, oo la dabaaldegaya!
Sanadka 2019, si loo waafajiyo isbeddelada cusub ee suuqa lana xoojiyo qaabka macaamiisha adeegga ee suuqa Bariga China, Shirkadda TCN waxay ka furatay xarun khibrad macaamiil caadi ah oo ku taal Room C102, 1128 Jindu Road, Degmada Minhang, Shanghai. Xarunta cusub ee waayo-aragnimada macaamiisha, oo isku-darka muuqaalka noocyada, taageerada iibka iyo adeegga iibka ka dib, waa mid ka mid xarumaha ugu muhiimsan ee taageerada shirkadda ee Bariga Shiinaha.
Sida uu sheegayo Li Liu, kuxigeenka sare ee mashiinka iibinta Hunan TCN Co,. Ltd, oo mas'uul ka ahaa soo dhaweynta maalintaas, xarunta cusub waxay tixgalineysaa baahiyaha dhabta ah ee kormeerayaasha macaamiisha. Kaliya maahan xaalado baarkin oo ku habboon (baarkin weyn oo baabuurta la dhigto), laakiin sidoo kale waxay leedahay koox ka caawisa macaamiisha ku dhawaad ​​20 qof. Laga bilaabo iibka illaa iibinta ka dib, waxay xaqiijin kartaa xalka hal-hal ee dhibaatooyinka macaamiisha. Liu Li wuxuu sheegay in Bandhiga Laydhku uu yahay dabaaldeg dhaqameed Shiinees ah. Waxaan rajeyneynaa in furitaanka iiddu ay u suuragelinayso macaamiisha iyo mashiinnada inay ku guuleystaan ​​"midaynta mashiinka" maanta.
Goobta, mashiinada lagu soo bandhigay xaruntani waxay aasaaska u yihiin dhamaan taxanaha alaabada TCN, sida
Mashiinka cabbitaanka ee masaska leh
mishiin isku-dhafka ah,
mashiinka iibinta warbaahinta badan,
salad cusub iyo miraha iibinta wiishashka,
mashiinka iibinta caanaha,
qaboojiyaha iyo kuleylka mashiinka sanduuqa qadada oo isku dhafan,
qaboojiyaha ka goynta 18 digrii,
mashiinka iibinta kartoomada,
dukaan aan la aqoon,
mashiinka wax iibinta kafeega
iyo wixii la mid ah.
Laga soo bilaabo tirada moodeelada la soo bandhigay, Sidoo kale waa dhif in warshadaha.
Shirkadaha ka hawlgala Hunan waxay had iyo jeer lahaan jireen ruuxa la dagaallamaya midba midka kale, booqashadani sidoo kale waa dhiirigalinta Hunanese. Dhamaan shaqaaluhu waxay ku mashquulsan yihiin shaqada inta lagu jiro ciidaha. Kooxda waxay ku kaftamaan inay rabaan inay "Hunan ciidan cusub" ka dhisaan warshadaha mashiinka iibka ee Shanghai, taas oo umuuqata inaysan ahayn khuraafaad.
HOREImaatinka Cusub !!! Mashiinka iibinta TCN
NEXT Mashiinka iibinta TCN ---- Dagaalkii ugu horreeyay ee Carwada Sannadka Cusub!